Wasiirka waxbarashada dalka Kenya oo soo dhisay guddi ka shaqeynaya dib u furka dugsiyada – Radio Damal
Wasiirka waxbarashada dalka Kenya oo soo dhisay guddi ka shaqeynaya dib u furka dugsiyada
Dowladda dhexe ee dalka kenya gaar ahaan wasaaradda tacliinta ayaa soo magacawday guddi ka kooban 9 xubnood oo loo xilsaaray inuu talasiin ka bixiyo geedisocodka ku aaddan sidii dugsiyada dib loogu furi lahaa.
Tani ayaa timid kaddib markii waalidiinta iyo ardayda guud ahaan dalka Kenya ay walaac ka muujiyeen xirnaanshaha goobaha waxbarashada.
Waxaa uu horay qorshuhu ahaa in dugsiyada la furi 4-tii bishan balse muddo hal bil ah ayaa lagu kordhiyay waxaana lagu wadaa in howlaha tacliinta ee wadanka ay dib u billowdaan bisha lixaad ee sannadkan.
Guddigan oo uu soo bandhigay wasiirka wasaaradda waxbarashasa ee dalka Prof. George Magoha ayaa waxaa hoggaamin doonto Dr. Sarah Ruto oo ah guddoomiyaha machadka horumarinta manhajka tacliinta ee KICD.
Prof. Magoha ayaa bayana uu soo saaray ku sheegay in guddigan uu ka heli doono talasiin ku saabsan ilaa 9 qodob oo ay ka mid tahay dib u eegis lagu sameynaya jadwalka sannad dugsiyeedka iyadoo lagu saleynaya waxyaabaha isa soo taraya ee la xiriira cudurka COVID-19
Sido kale xubnaha guddigan ayaa laga doonaya inay warbixino joogta ah y gudbiyaan wasiirka waxbarashada.
Xarumaha tacliinta ee dalka ayaa la xiray bartamihii bishii saddexaad ee sannadkan kaddib markii kiisas ku saabsan caabuqa coronavirus laga xaqiijiyay gudaha wadanka.
Waajibaadka kale ee guddiga uu Magoha soo magacaabay ayaa ah inay diiwaangeliyaan goobaha waxbarasho ee uu saameeyay cudurka COVID-19 maadaama qaar ka mid ah loo isticmaalaya howlaha karantiilka.